Sheekada filimka Veere Di Wedding: Kareena iyo Sonam waxay la imaadeen filim xiiso badan | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Veere Di Wedding: Kareena iyo Sonam waxay la imaadeen filim xiiso badan
Taariikhda: June 1, 2018
Inta badan Bollywood-ka wey sameeyeen filimo saaxiibtinimada ka hadlayaan balse Veere Di Wedding waa fariin nagu cusub oo xambaarsan saaxiibtinimada qotoda dheer ee afar gabdhood ka dhaxeyso.
Veere Di Wedding waa filim reer magaalka loogu tala galay sidoo kalena ah filim ay Kareena Kapoor Khan kusoo laabaneyso madaama ku dhawaad labo sano wax filim ah tiyaatarada loo saarin.
Jilaayaasha filimkaan: Kareena Kapoor Khan, Sonam Kapoor Ahuja, Swara Bhasker, Shikha Talsania, Sumeet Vyas, Manoj Pahwa.
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 5-daqiiqo
Qiimeynta Fariinta Filimkankan: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Muxuu Ku Wanaagsan Filimkaan: Waa filim fariin wacan xambaarsan, shactiro leh, bandhiga jilaayaasha aad u sareeyo heeso wacana leh.
Muxuu Ku Liitaa Filimkaan: Mararka qaar sheekada qaabka ay socoto waa lagu wareeraa sidoo kalena waa filim hablaha lagu buun buuninaayo raggana lagu diidayo meelaha qaar, sidoo kalena luqada adeegsanayo ma yara wanaagsano.
Fariinta Filimka Veere Di Wedding Oo Kooban: Filimkaan sheeko ahaan wuxuu ku saabsan yahay afar gabdhood oo saaxiibo ah Kalindi Puri (Kareena Kapoor Khan), Avni Sharma (Sonam Kapoor Ahuja), Sakshi Soni (Swara Bhasker) iyo Meera Sood (Shikha Talsania).
Avni Sharma (Sonam Kapoor Ahuja) waa qareen ama abuukaate shaqo wacan heesato sidoo kalena garoob ah laakiin hooyadeed (Neena Gupta) ayaa culees ku heyso si ay u aragto gabadheeda oo mar labaad guursato.
Sakshi Soni (Swara Bhasker) waa marwo reer leh balse aan ku faraxsaneyn nolosheeda guurka halka Meera Sood (Shikha Talsania) iyadana waa marwo sidoo kalena waxaa u joogo wiil laakiin kuma faraxsano in aabaheed uusan jecleesanin guurkeeda sidoo kalena aqbalaad reerkeeda ka heesaneyn.
Kalindi Puri (Kareena Kapoor Khan) waxay saaxiib la tahay Rishabh Malhotra (Sumeet Vyas) waxaana ka dhaxeeyo xiriir wacan iyo is fahan dheeraad ah balse si lama filaan ah Rishabh Malhotra (Sumeet Vyas) maalin ayuu Kalindi Puri (Kareena Kapoor Khan) guur usoo bandhigaa weyna ka aqbalee balse ayadoo shaki ama walaac nolosha guurka ka qabto.
Kalindi Puri (Kareena Kapoor Khan) guurkeeda waqti ayaa loo yeelaa si dad badan uga soo qayb galaan xaflad heer sare ahna loo dhigo.
Sidaa darteed Kalindi Puri (Kareena Kapoor Khan) waxay casuumeysaa sedexdeeda saaxiib si ay waqti u wacan u wada qaataan inta aysan guursaneyn waxayna wada qaadanayaan waqti badan oo lagu ogaanayo qof walbo waxa uu jecel yahay, dhibaatada heesato iyo sida qof walbo xal ugu heli lahaa noloshiisa aan dhameestirneyn.
Bandhiga Jilaayaasha: Wey adag tahay in la kala saaro afarta atirisho sida wacan oo ay filimkaan u wada jileen ayagoo shaashada ku muujiyeen is fahan dheeraad ah inuu ka dhaxeeyo aadna kuu soo jiidanayaan sida ay iskula jaan qaadayaan qaab jiliin ahaan.
Laakiin Kareena Kapoor Khan ayaa qaadatay doorka ugu wacan ee filimkan siweyn kuu xiiso galinaayo waxayna sameeneysaa soo laabasho adag welina Bebo fanka waa u baahan yahay.
Sonam Kapoor iyadana door adag ayay qaadatay balse atirishooyinka kale ayaa ka saameyn badan marka si gaar ah oo eego mashruucaan.
Inaba caadi ma ahan Swara Bhasker doorkeeda atirishadan filim walbo ay kasoo muuqato saameyn adag ayay la timaaday filimka Veere Di Wedding ku leedahay.
Shikha Talsania iyadana door wacan ayay leedahay kamana liidato atirishooyinka kale inkastoo laga waaya aragsan yahay lagana saameyn badan yahay.
Sumeet Vyas isagana doorkiisa waa mid kusoo jiidanayo inkastoo filim atirisho uu mashruucan yaha sidoo kalena dhaman jilaayaasha kale ee kasoo muuqdeen filimkan doorarkooda wuu wacan yahay.
Maxaa Laga Yiri Fariinka Filimkan: Halka saac ee hore waa heer sare filimkan sidoo kalena is fahanka atirishooyinka ka dhaxeeyo waa mid ku xiiso galinaayo balse qaybaha dambe ayu xoogaa yara liitaa isku xirkiisa iyo qaabka uu ku dhamaanayo oo aan ahayn mid adag.
Director Shashanka Ghosh si wacan ayuu shaqo ahaan kaga baxsaday qaabka uu atirishooyinka doorarkooda u tayeeyay kaliya waxaa ka harsaneyd inuu fariintiisa si adag kusoo gunaanado.
Gunaanad: Veere Di Wedding waa fariin reer magaalka loogu tala galay sidoo kalena tiyaatarada Multiplex loo yaqaan ka gadmi doono mana ahan fariin dadka oo dhan daawan karaan madaama hadalo aan anshax ahayn iyo muuqaalo aan wanaagsaneyn ku jiraan filimkaan balse dhalinta siweyn ayuu usoo jiidan doona.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Veere Di Wedding:
Waxaa Aqrisay 894